Soo dejisan ConvertXtoDVD 6.0.0.90 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: ConvertXtoDVD
ConvertXtoDVD – fudud ah si ay u isticmaalaan software si loogu badalo video qaab DVD. software waxa uu go’an dhamaystiran oo qalab in la abuuro video DVD tayo leh. ConvertXtoDVD taageertaa qaabab video caan ah, files ka mid ah kamaradaha digital iyo TV-tuners. software waa ay awoodaan in ay ku dar kuwan raadkaygay maqal ah oo subtitles in faylka, qabsadaan doorasho midabka, gooyay qaybo aan la rabin, darsamaan video kale, iwm ConvertXtoDVD ka kooban module gaar ah reserved fursadaha ugu muhiimsan ee software ee baahida ah user.
Gubasho video ah la gediyay ku DVD-side
Tafatir oo ka mid ah files video
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ah waxyaabaha la abuuray
Waxay abuurtaa menu DVD ah
Soo dejisan ConvertXtoDVD
Faallo ku saabsan ConvertXtoDVD
ConvertXtoDVD Xirfadaha la xiriira